Naqshad Cusub oo Naqshadeynta Emailka (Loo Baahan Yahay) | Martech Zone
Waa kuwan emayl kale oo aan jeclahay inaan helo, laakiin badiyaa waxba ha ku samayn! Tani waa Bartamaha Indianapolis, Email Cajiib Ah Oo Cusub.
Waan iska diiwaan galiyay maxaa yeelay waxaan rajaynayaa in naqshad cusubi soo baxdo - macluumaadka kor u qaad bartamaha magaalada Indianapolis way wada jiraan, laakiin naqshaddu waxay ka dhigaysaa emaylka lama akhrin karo oo aan la isticmaali karin. Waa tan sababta:
Ma jiro xiriir weyn oo ku saabsan macluumaadka madaxa ee bogga rasmiga ah Hal qayb oo ka mid ah Indy Downtown Inc. Waxaa laga yaabaa in taasi kormeer tahay, laakiin waxaan u maleynayaa inay runtii u baahan tahay.
Sawirada ku jira cinwaanka waa kuwo yaryar oo aan waxtar lahayn - xitaa ma sameyn karo banaanka. Malahayga waa qofkastoo e-mayl naqshadeeyay e-maylku wuxuu leeyahay xal aad ugayar sidaan sameeyo markaa waxaa laga yaabaa inay u muuqdaan kuwo ka weyn. Waxay qaadanayaan meel qiimo leh 'oo ka koreysa laabta'… booska ay dadku dhab ahaantii leeyihiin awooddo fiiri markay furayaan emaylka macmiilkooda.
Baaragaraafka koowaad ee bidix, Eray ka yimid IDI, waa cinwaan liita oo aan la fahmi karin. Waxaa laga yaabaa in dadyowgu aysan xitaa ogeyn waxa loo yaqaan 'IDI'?
Cabbirka farku waa yar yahay, lama akhrin karo, mana lahan jajab ama cutub u oggolaanaya indhahayga inay dul socdaan waxa ku jira. Natiijo ahaan, ma aanan aqrin! Sawirku wuxuu ahaa wicitaan weyn, in kastoo!
Dhacdooyinka jadwalka taariikhda ayaa laga yaabaa inay yihiin waxa ugu fiican e-maylkan, laakiin ma jiro wax wicitaan ah oo wax looga qabanayo dhacdooyinka… i siiya xiriirin aan ku iibsado tikidhada oo aan macluumaad dheeri ah uga helo dhacdo kasta si aan u tago! Ma doonayo inaan halkan ku arko dhacdo oo waxaan iskudayaa inaan ka baaro Google. Waqti uma lihi taas!
Waxyaabaha ku jira ayaa la jajabiyaa oo lagu jajabiyaa tiirar khafiif ah oo aan loo baahnayn. Dadku waxay kujiraan kormeerayaal aad u balaaran hada qaraarro balaaran… u wareega 800 ilaa 1000 pixel qaab balaaran. Maaddaama jadwalkaaga uu yahay dhinac midig, isticmaaleha ayaan ka fikiri doonin inuu si qumman u rogrogo si uu u gaaro dhinac ka dibna u akhriyo.
Fadlan ka saar
tiirar baa qallalay
waxaa jira oo keliya
qol ku filan
si aad u akhrido.
Waxaa loo baahan yahay ugu yaraan hal wicitaan xad dhaaf ah oo wax looga qabanayo emaylka. Ma waxaad rabtaa inaan soo booqdo Suuqa Magaalada? Iibso tigidh riwaayad? Ii soo wac hal wicitaan oo ficil ah halkii aan ka dooran lahaa 40. Wax badan iiga sheeg wax ka badan inta kale oo dhan ee halkaas ii kaxayn doonta.
Ku dar bogagga degitaanka iyo qaybaha haddii aad ka welwelsan tahay qolka. Qor qoraal kooban oo ku lifaaqan 'sheekada buuxda' oo ii keenta bog leh qolno neefsasho iyo macluumaad dheeri ah.
Aaway sawirradii dadka? La'aanta sawirada dadka dhoola cadeynaya e-maylkan waxay iga dhigeysaa inaan dareemayo inaan aqrinayo buug-yare ama maqaalka wararka. Sawirada dadka ku raaxeysanaya dhacdooyinkan iyo goobaha ku yaal bartamaha magaalada Indy ayaa ila xiriiri doona.
Maxaa dhacay usbuucii hore? Ka waran soo koobid weyn oo dhacdo ama ganacsi ah oo aad ku dallacsiisay emaylka iyada oo faallooyinka qaar laga helayo akhristayaasha ku saabsan sida waqtiga cajiibka ah u haysteen. Shakhsi ka dhig!
Ujeeddadaydu maaha inaan ku dhufto emaylkan. Sidaan idhi, waxaa ka buuxa macluumaad aad u fara badan… laga yaabee inay aad u badan tahay! Way cadahay in dadka qoray nuqulku ay sameeyeen shaqadooda guriga - waxay u baahan tahay oo keliya soo bandhigid ka wanaagsan si ay akhristayaashu u cunaan uguna dhaqmaan.
Tags: adwords dhibcaha tayadagoogle adwords dhibcaha tayada.htaccesshagaajinta astaantaqeexitaanka mobiladaaan ahayn wwwdhibco tayo lehMedia Social Suuqdejinta shabakaddawww
Cusboonaysii Finalka I-Prize ee Cisco
Tijaabinta Hogaaminta ee Wada Tashiga
Haddaan ahaan lahaa naqshadayaasha / qorayaasha emailka waan iska difaaci lahaa. nuqul ka jar ugu yaraan 1/2. Waad ku xiriirin kartaa qormooyinka qaarkood bog kale oo ka kooban.
Jidka nuqul badan emayl ahaan.